Mpanamboatra sy mpamatsy fiara manokana | China Automobile Factory
Fiara manokana dia be mpampiasa amin'ny indostria mavesatra maro izay ahitana kamio miasa amin'ny habakabaka avo lenta, kamiaobe mpamono afo, kamio fako sns sns.
Kamiao mpamono afo Dongfeng 5-6 taonina no novaina niaraka tamin'ny chassis Dongfeng EQ1168GLJ5. Ny fiara iray manontolo dia misy kompartin'ny mpamono afo sy vatana iray. Ny efitrefitry ny mpandeha dia andalana tokana na roa heny, izay mahazaka olona 3 + 3.
Ny kamiao mpamono afo anay dia novaina niaraka tamin'ny chassis Dongfeng EQ1041DJ3BDC. Ny fiara dia misy ampahany roa: ny vatan'ny mpandeha afo sy ny vatana. Ny efitrefitra mpandeha dia laharana roa sosona ary afaka mipetraka olona 2 + 3. Ny fiara dia manana firafitry ny tanky anatiny.
Ny fiara miasa avo lenta dia manana tombony izay tsy ampitahain'ny fitaovana miasa amin'ny habakabaka hafa, izany hoe afaka manao asa lavitra ary mandeha be, mifindra amin'ny tanàna iray mankany amin'ny tanàna hafa na firenena iray aza. Izy io dia manana toerana tsy azo soloina amin'ny hetsiky ny tanàna.
Ny kamionan'ny tranobenay dia misy ny1. Ny boom sy ny outrigger dia vita amin'ny mombamomba ny low Q345 alloy, tsy misy lasitra manodidina, tsara tarehy, be hery ary avo hery; 2. Ireo mpampantsary miendrika H dia manana fitoniana tsara, ny sifotra dia azo ampiasaina amin'ny fotoana iray na misaraka, malefaka ny fandidiana, ary afaka mifanaraka amin'ny toe-javatra iasana izy; 3. Ny mekanisma famonoana dia manana karazana azo ovaina, izay mety amin'ny fanitsiana; 4. Ny turntable dia mihodina 360 ° amin'ny lafiny roa ary mandray mekanisma fanalefahana karazana turbo-worm mandroso (miaraka amin'ny asan'ny fanosotra tena sy ny fanidiana tena). Ny fikojakojana aorian'izay dia azo tanterahina mora ihany koa amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny toeran'ny bolt; 5. Ny fiasan-tsambo dia mandray ny maodelim-baravarana fanaraha-maso elektronika mifangaro, miaraka amina endriny mahafinaritra, fandidiana azo antoka ary fikojakojana mety; 6. Mifamatotra ny fidinana sy ny fidinana, azo antoka sy azo antoka ny fandidiana; 7. Ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha tsy misy dingana dia tratra amin'ny alàlan'ny valizy throttle mandritra ny fijanonana; 8. Ny sobika mihantona dia mampiasa tsorakazo ivelany ho an'ny haavo mekanika, izay azo antoka kokoa sy azo itokisana; 9. Ny sobika mihodina na mihantona dia miaraka amina fanombohana sy fijanonana izay mety hampiasaina sy hitehirizana solika; ny kamiaoninay mpamono afo dia mizara ho an'ny kamiao mpamono afo sy kamiao mpiady afo. Izy io dia novaina tamin'ny chassis Dongfeng EQ1168GLJ5. Ny fiara iray manontolo dia misy kompartin'ny mpamono afo sy vatana iray. Ny efitrefitry ny mpandeha dia andalana tokana na roa heny, izay mahazaka olona 3 + 3. Ny fiara dia manana firafitry ny tanky anatiny, boaty fampitaovana ny faritra anoloana amin'ny vatana, ary tanky rano ny tapany afovoany. Ny tapany aoriana dia ny efitranon'ny paompy. Ny tanky mitondra rano dia vita amin'ny vy karbonika avo lenta ary mifamatotra amin'ny chassis. Ny fahafaha-mitondra rano dia 3800kg (PM50) / 5200kg (SG50), ary 1400kg (PM60) ny habetsaky ny ranoka. Izy io dia miaraka amin'ny tsindry ambany CB10 / 30 novokarin'i Shanghai Rongshen Fire Fighting Equipment Co., Ltd. Ny tampon-trano dia misy fitaovana fanaraha-maso fiara PL24 (PM50) na PS30W (SG50) novokarin'i Chengdu West Fire Machinary Co., Ltd. Ny fiasa lehibe indrindra amin'ny fiara dia ny fahafahan'ny rano be, ny fifehezana tsara ary ny fikojakojana mora foana. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny brigady, ozinina, toeram-pitrandrahana, fiarahamonina, dock ary toerana hafa hiadiana amin'ny doro-afo lehibe na haintrano ankapobeny. ny chassis dia nandalo ny fanamarinana vokatra tsy maintsy hatao amin'ny firenena; ny famoahana ny motera dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fetra fahadimy an'ny GB17691-2005 (fenitra National V); ny fiara iray manontolo dia nandalo ny fizahana ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fanaraha-maso kalitao ho an'ny afo (tatitra No. .: Zb201631225 / 226) ary tafiditra ao anatin'ny fanambarana momba ny vokatra fiara vaovao nataon'ny Minisiteran'ny Indostria sy ny haitao fampahalalam-baovao.